पैसा लिने पत्रकार भनेर कसरी गर्व गर्नु ? : स्वेच्छा राउत « Ramailo छ
कोही नयाँ मान्छे आउनु, २/३ महिना फिल्म घोषणादेखि गीत, ट्रेलरदेखि फिल्म रिलिजका कार्यक्रमहरुमा धाउनु र ‘फिल्म पत्रकार’ बन्ने प्रक्रिया निकै सामान्य अनि सहज बनेको छ । काम सुरु गरेको केही महिनापछि आफ्नै मिडिया खोल्ने कन्फिडेन्स पनि हामी धेरैमा जाग्छ । पत्रकारपछि अनलाइन सञ्चालक अनि सम्पादक पनि आफै । क्यामेरा र माइक सम्हाल्न जाने झन् गज्जव । यो सब, कामसुरु गरेको ३ देखि ६ महिना भित्र नै हुन्छ ।
चलचित्र पत्रकारहरुको सख्या बढ्दो छ । साथै फिल्म विशेष पोर्टलहरु पनि सख्यात्मक हिसाबमा धेरै भएका छन् । यसरी संख्यात्मक रुपमा बढ्दै गर्दा लिंक खोलेर हामीलाई टिक्न र बिक्न सहयोग गर्ने पाठक र दर्शकका लागि चाहिं के गरेका वा दिएका छौं त ? हामीलाई पढ्दिन, हेर्दिन लायक सामाग्री दिएका छौं ? कि यो साता यो फिल्म घोषणा, हिजो यसको गीत रिलिज भयो, यो फिल्मको ट्रेलर आयो है भनेर सूचना मात्र प्रवाह गरिरहेका छौ ?
अवाक् म । विज्ञापन लिने काम त म गर्दिन । मैले पनि प्रश्न नै गरे । ‘के को पैसा?’ ओहो समाचार प्रकाशन गरे वापतको पैसा रे !
चलचित्र पत्रकारिता व्यवसायिक र यो क्षेत्रलाई मर्या्दित बनाउन यस्तो अस्वस्थ लेनदेनले सहयोग गर्छ ? जवाफ बिनाका प्रश्नको औचित्य छैन । तर, हामीले हिडेको बाटो ठिक छ की छैन समीक्षा आवश्यक छ । यसरी नै हिड्दा कहाँ पुगिन्छ त्यो पनि सोच्न पर्छ, सायद । किनकि आजको १०/२० वा केही वर्षपछि हामी फिल्म पत्रकारिता र पत्रकारको स्तरलाई कहाँ देख्न चाहन्छौं त्यो हिड्दै आएको बाटोले निर्धारण गर्छ । आखिर हामी पनि देखाइएको बाटोमा न चलिरहेका हौं ।
प्रविधि, इन्टरनेट, सामाजिक संजालको प्रयोगले हामीलाई पत्रकार बन्न सजिलो बनाइ दिएको हो । भोलि प्रविधिले अझै फड्को मार्दा हामी जहाँको त्यहिँ रह्यौं भने ? यसै पनि फिल्मकर्मीले फिल्मकै नाममा फेसबुक पेज, युट्युब च्यानल, ट्विटर ह्यान्डल बनाएर प्रचार प्रसार गर्न थालिसकेका छन् । त्यही मार्फत हरेक जानकारी अपडेट पनि हुन्छ । केही फिल्मी अनलाइनमा हुने भन्दा बढी हिट्स फिल्मको पेजमा देखिन्छन् । समाचार पोर्टलले गर्ने काम सामाजिक सञ्जालले गर्छ भने निर्माताले किन खर्च गरुन् मिडिया मार्फत गरिने प्रचार प्रसारका लागि ?
आहा ! प्रश्न गर्न पाउने अधिकार, चाहेको कुरा खोज्न, छान्न र भन्न पाउने अधिकार, सूचना स्रोतसम्मको पहुँच । तर हामी सतहमा रमाइ रहेका छौं । देखिएका कुराहरुलाई ‘हुनसक्छ’ भनेर लेखिदिन्छौं । बोलेको कुरालाई द्विअर्थी थम्बनेल राखेर पाठक र दर्शक तान्छौं । कतै कलाकारको लुगाको नापमा त कतै फिल्मकर्मीलाई गरिने सम्बोधनमा हामी अल्झिएका छौं । यो सब कुराहरुले हामीलाई बाँधेर राखेको सायदै सोचेका छौं । ‘आखिर उहाँ त यति निकट हुनुन्छ फिल्म चलेन भनेर किन नकारात्मक प्रचार गर्दिनु ?’ जस्ता भाव आइहाल्छ । यस्ता कुराहरु महसुस गरिरहँदा हामीले व्यक्तिगत वा भावनात्मक सम्बन्ध र पेशागत सम्बन्धबीचको फरक छुट्याउन नसकेको आफैमा छर्लङ्ग भइन्छ । र यो सबले हामीलाई स्वतन्त्र रहन र निरपेक्ष ढङ्गमा काम गर्न नदिने पनि थाहा हुन्छ । ‘तर, के गर्नु? यसो नगरे गाह्रो छ’मा गएर जिज्ञासाहरुको ब्रेक लाग्छ ।
फिल्म पत्रकारिताले जोडेको छ आम दर्शकलाई कलाकार र फिल्मकर्मीसँग, फिल्म प्रचार प्रसारमा सकारात्मक सहयोग भएको छ, फिल्मसँग जोडिएका हरेकले आफ्नो कुरा राख्ने ठाउँ पाएका छन् । सकारात्मक पक्षहरु नियाल्दा निकै मजा लाग्छ । अब यस्तै कुराहरुलाई सबै मिलेर मर्या्दित बनाएर अघि बढ्नु न हो । कति मज्जा हुन्छ हामी जोडिएको क्षेत्र बारे जानकारीमूलक केही दिन सके, मनोरञ्जन सम्बन्धी कन्टेन्ट पनि पनि मेनस्ट्रिम मिडिया वा पत्रपत्रिकाको मुख्य समाचार बने । सम्बन्धहरुको सम्मानसहित सत्य तथ्य सम्प्रेषणको मज्जा । फिल्मी अनलाइनमा फिल्मको बाहेक अन्य फरक फरक विज्ञापनहरु आउने बनाउन सके । दर्शकले के रुचाउँछन् त्यही मात्र खोज्नुभन्दा पनि यो चाहिं पढ्न वा हेर्न आवश्यक छ है भन्ने बुझाउन सके ।
समग्रमा फिल्म पत्रकारिता क्षेत्र व्यवसायिक बनाउन अत्यावश्यक छ । ताकि भोलि कसैले ‘बहिनी मेरो गीत ट्रेन्डिङमा आयो युट्युब लिंकसहित समाचार बनाइ देउ त?’ सोध्ने ठाउँ नहोस् । बरु हामीले नै भन्न सकौं ‘हाम्रो अनलाइनमा अन्य युट्युब च्यानलमा प्रकाशित सामाग्रीको प्रचार गरिदैन’ ।
(राउत, पहिलो पोस्टसँग आबद्ध छिन् ।)